यी चार राशिका व्यक्तिलाई मानिन्छ निकै भाग्यमानी, तपाई पनि पर्नुभयो की ? – Sandesh Press
October 10, 2021 252
काठमाडौँ । ज्योतिषी भाषाअनुसार भन्ने हो भने तपाईहाम्रो जीवन राशिअनुसार चल्छ । तपाईमाथि गृह, नक्षेत्रको के कस्तो प्रभाव परेको छ, यो कुरा राशिले स्वतः दर्शाउँछ ।
कुनै पनि व्यक्ति कस्तो होला ? जस्तो देखिन्छ के वास्तवमै त्यो व्यक्ति त्यस्तो होला रु यी सबै सवालको जवाफ पनि हामीलाई ज्योतिषीको माध्यमबाट मिल्न सक्छ । जीवनको गोप्या कुराको खुलासा पनि तपाईको कंडलीले गर्छ ।
जो मानिसहरु योग्य हुन्छन्, उनीहरुसँग यस राशिका व्यक्ति इमान्दारी निभाउँछन । तर, जो व्यक्तिहरु खुद धोकेबाज हुन्छन् ती व्यक्तिहरुले भने यस राशिका व्यक्तिबाट सदैव सावधान रहनु जरुरी हुन्छ ।
यो राशि सबैभन्दा उत्कृष्ट राशि मानिन्छ, किनभने यो राशिका मानिसहरुमा आत्म नियन्त्रणको भावना धेरै प्रबल हुन्छ । अन्य राशि भएका व्यक्तिको मकर राशिवालाहरुमा उत्कृष्ट तरिकाले सोच्ने र सम्झने क्षमता हुन्छ ।
Prevशरीरमा रगतको कमी हुँदा देखिन्छन् यस्ता सङ्केत, खानुहोस् यी खानेकुरा
Nextदसैंको मुखैमा सरकारले गर्यो जनता रुवाउने निर्णय, सबै मारमा पर्ने निश्चित, कहिलेदेखि हुन्छ लागु ?
नेपालमा तीन जनामा ओमिक्रोन भेरियन्टको पुष्टि, हटस्पट पत्ता लगाइ एन्टिजेन किटद्वारा परीक्षण गर्न निर्देशन